Umhlahlandlela ophumelelayo ovela ku-Semalt wokuqeda ukuhamba kwe-Ghost Referral In Google Analytics
Imoto yokudluliselwa kwe-Ghost ibhekisela kumgwaqo ongavakashelanga isayithi, ukugwema amathuluzi weprotocol wokulinganisa we-Google Analytics. Futhi, ithrekhi yokudlulisa ighost akuzona izigaxa noma i-bots ezivimbela iwebhusayithi ngoba zingalokothi zithinte ikhasi lewebhu. Ngokuvamile, imibiko yokudlulisela emgwaqeni yokudlulisa izimoto noma igama lokusingatha ukudonsa umsebenzisi we-intanethi ukuchofoza amasayithi noma amakhasi.
Ochwepheshe be-intanethi bathi i-traffic yokudlulisela imoto ingavinjelwa ngokusetshenziswa kwesihlungi segama lomsingathi ngoba zivela kwamanye amakhasi. Ukufaka igama lomnikazi wesayithi kuphela kuvimbela olunye ulwazi lomninimzi we-hostname kusukela ekuphumeni ku-Imibiko ye-Google Analytics.
Abaduni be-Spammy bangakwazi ukubhala igama lomkhosi wesayithi kanye nezihlungi ngokuthumela ngokuzenzakalelayo ithrafikhi embi. Kulolu cala, imoto yokudluliselwa kweghost ngeke ihlukaniswe kusuka ezihlungi ezingenzi lutho nendawo evamile yesayithi. Ngakho-ke umsebenzisi we-intanethi angaqeda kanjani noma anciphise umgwaqo wokudlulisa umoya?
Indlela ephumelelayo yokuvimbela ithrekhi ngaphandle kwesayithi lomsebenzisi ukusebenzisa inhlanganisela ye-Universal Analytics ngezihlungi zokulandelela kanye nezinguquko.
Thola izinyathelo ezibalulekile zale nqubo kumhlahlandlela olandelayo ochazwe nguFrank Abagnale, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt .
1. Setha i-Cookie
Isinyathelo sokuqala esisisekelo ekuqedeni umgwaqo wokudlulisela umoya ukusetha amakhukhi esayithi. Lokhu kungafezwa ngesandla noma ngedijithi ngokusetshenziswa kwe-Google Tag Manager..Ngakho-ke, noma ubani othola isayithi ngokungemthetho uzothola ikhukhi lewebhu. Ngokwesibonelo, cabangela igama le-nondescript njenge "dev-status" ngenani le "june2016" okwenza usuku lokuphelelwa yisikhathi esikhathini esizayo. Noma nini lapho umkhwabanisi ehlasela isayithi, umnikazi angabuyekeza ikhukhi nge "dev-status = june2016" ngaleyo ndlela ekhulisa ukuphila kwayo.
2. Yakha i-Custom Dimension
Ubukhulu benkambiso kufanele buhlelwe kwiNdawo yePropati ngaphakathi kwe-Google Analytics. Ukuze uphephe, kunconywa ukuthi abasebenzisi kumele bahlele ubukhulu emkhakheni womsebenzisi. Ekugcineni, bhala phansi inombolo yokukhomba.
3. Thatha ukubaluleka kwekhukhi
Lokhu kungasetshenziswa ngokusebenzisa ukusetshenziswa kwe-Google Tag Manager ngokudala i-Macokie entsha ye-Macro noma eguqukayo.
4. Dlula ku-Value Cookie
Kufezwa ngokusetshenziswa kwe-Google Tag Manager. Abasebenzisi kufanele bathathe i-Macro / Ehlukile futhi bayifake ku-Custom Dimension ngaphakathi kwe-Tag Analytics yokubuka ikhasi le-Google Analytics.
5. Ukuqeda uMgwaqo Omubi
Lesi yisinyathelo sokugcina. Ekhasini le-Google Analytics, yakha isihlungi esisha ngokufaka i-Custom Dimension ethize ukusetha inani elibekiwe.
Ngakho-ke, i-ghost yokudlulisela izimoto isho imoto, hhayi esiteshini somsebenzisi futhi ayibukeli isayithi. Ukwengeza, "i-Smart Ghost Referrals" ilinganisa ubukhulu bendawo yesayithi futhi yinkimbinkimbi kunazo zonke ngoba ihlakaniphile ngokwanele ukuskena iwebhusayithi ngokulingisa ezinye izici ngaphandle kwekhasi elijwayelekile lewebhu lewebhu.